Faaqidaadda Toddobaadka, 21 December 2012
Khamiis 21 December 2012
Faaqidaadda: Amarka Kenya ee Qaxootiga
Barnaamijka Faaqidaadda Todobaadka waxa uu ku saabsan yahay amarkii ka soo baxay dowladda Kenya ee ahaa in qaxootiga Soomaalida ee ku nool magaalooyinka dalkaasi ay dib ugu noqdaan xerayaha qaxootiga
Faqidaada:Qalalaasaha Siyaasadda Puntland
Barnaamijka Faaqidaadda todobaadka waxa uu ku saabsan yahay kQalalaasaha Siyaasadda ee Maamul-goboleedka Puntland
Faqidaadda: Rabshadihii ka Dhacay Gaarisa iyo Islii
Barnaamiika Faqidaadda Todobaadka waxaan ku saabsan rabshadihii dhimashada iyo dhaawaca dhaliyay ee ka dhacay Gaarisa iyo xaafadda Islii ee Nairobi. Militariga Kenya ayaa lagu eedeeyey inay gubeen suuqii Gaarisa.
Faaqidaadda: Ololaha Doorashada Somaliland
Barnaamijka Faaqidaaddu wuxuu toddobaadkan ku saabsan yahay ololaha doorashooyinka golayaasha deegaanka ee Somaliland oo la qaban doono dhammaadka bishan November.
Faaqidaadda: Qorshaha Maamul u Sameynta Jubbooyinka.
Dalka Kenya waxaa ka socday shirar maamul loogu sameynayay Jubbooyinka, waxaana lagu heshiiyay qorshe maamul mideysan lagu dhisayo iyo dastuur ay ansixin doonaan ergooyin gobolladaasi laga soo uruurinayo. Dhageyso Barnaamijka Faaqidaadda oo arrintaasi ku saasban.
Faaqidaadda: Soomaalida iyo Doorashada Maraykanka
Doorashada Maraykanka ayaa la qabanayaa 6-ba bisha. Haddaba Faaqidaadda ayaa toddobaadkan lagu falanqeynayaa Soomaalida Maraykanka degan sida ayay uga qeybgalayaan dooashada, iyo waliba cidda ay kala taageerayaan labada musharrax?
Faaqidaadda: Maxaa Keenay Guuldarrada al-Shabab?
Faaqidaadda Toddobaaku wuxuu ku saabsan yahay guul-darooyinka militari ee soo gaaray ururka al-Shabab iyo saameynta ay ku yeelan karaan fikirka ay ku socdaan ururka Takfiiriga ah.
Faaqidaadda: Xaaladda Siyaasadda Puntland
Barnaamijkeena Faaqidaaddu wuxuu toddobaadkan ku saabsan yahay xaaladda siyaasadeed ee Puntland oo ay taagan tahay dooddo la xiriira muddo kororsiga madaxda maamulak iyo furista xisbiyada siyaasadda.
Faaqidaadda: Xal u Helidda Arrimaha Kismaayo
Barnaamijka Faaqidaaddu wuxuu ku saabsan yahay arrimaha Kismaayo iyo sida maamul loogu sameyn karo. Xubnaha ka qeybgalaya waxaa ku jira Faarax Macalin G/K/X Baarlamaanka Kenya.
Faaqidaadda: Dabagalka Soomaalida Qurbaha
Hay'ad u doodda xuquuqda dadka Islaamka ah ee Maraykanka ayaa sheegtay in dadka loogu joojiyo garoomada 80% ay Soomaali yihiin.
Faaqidadda: Fursadaha & Caqabadaha Horyaala Madaxweynaha Cusub
Barnaamijka Faaqidaadda ee toddobaadkan wuxuu ku saabsan yahay fursadaha iyo caqabadaha horyaalla madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ee 10-kii bishan la soo doortay.